Ihe omume Italiantali atọ na -akwalite njem nlegharị anya na nkwalite ntụkwasị obi ọhụrụ
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akwụkwọ akụkọ Italy » Ihe omume Italiantali atọ na -akwalite njem nlegharị anya na nkwalite ntụkwasị obi ọhụrụ
Na -agbasa Akụkọ Europe • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Akụkọ Ọchịchị • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • Akwụkwọ akụkọ Italy • Nzukọ Mmekọrịta Akụkọ • nzukọ • News • Iwughachi • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a
TTG, SIA na SUN 2021 na -abịa na njedebe nke ọma
Na ngwụcha nke ọma nke TTG, SIA, na SUN 2021, ọ bụ olile anya onye minista na -ahụ maka njem, Massimo Garavaglia na ebumnuche uto nke 20% nke GDP bụ ebumnuche a ga -enweta.
NGAN, SIA na SUN 2021 bịara na Rimini Expo Center (Italy) na ndị ọbịa na -edebanye aha 90% nke ọnụọgụ e dekọrọ na mbipụta 2019. Ndị otu ihe ngosi nke Ịtali haziri, ihe omume atọ a, nke jikọtara ọnụ na -enye ndị njem nlegharị anya, hụrụ mgbagha doro anya na ntụkwasị obi ndị ọrụ: isi isiokwu nke eji mepee mbipụta nke afọ a. Ya mere, njem nlegharị anya Italiantali na mba ụwa na-amalite ọzọ.
Ahịa njem nlegharị anya nke Italiantali nke otu ihe ngosi Italiantali haziri gbasara ọkwa ọnụnọ tupu oria ojoo.
Ụdị 1,800, nkwenye, na ntinye ọhụrụ sitere n'ọtụtụ mba ofesi na mpaghara Ịtali bịara.
Ihe karịrị ihe omume 200 na mpaghara 9 maka mkparịta ụka awa 650 na ozi bụ maka ndị ọkachamara ụlọ ọrụ.
Ntughari nke hụrụ ndị na-azụ ahịa 700 sitere na mba 40 si mba ọzọ (ọtụtụ n'ime ha na-abịa anụ ahụ yana mmekorita mebere maka ndị si mba ndị ga-achọ ụgbọ elu ogologo), 62% sitere na Europe na 38% site na mba ndị na-abụghị Europe. 80% nke ndị na-ahụ maka ọrụ ahọpụtara maka ihe dabara adaba na njem nlegharị anya ntụrụndụ (site na njem otu gaa na atụmatụ ndị e mere maka ịkwa akwa) yana inwekwu òkè na ngalaba MICE (Nzukọ, mkpali, Mgbakọ na ihe ngosi). N'ịgbasa ihe karịrị ụlọ nzukọ 19, ụdị 1,800 bịara na ihe karịrị narị ihe ngosi 200 nwere ihe karịrị 250 okwu na "Arenas" itoolu maka mkparịta ụka na ozi awa 650.
Nsonaazụ nke tụrụ anya nke ọma wee bịaruo ọkwa ọrịa tupu ọrịa amalite, na-enweta otuto dị ukwuu site n'aka ndị niile metụtara ya nọ ma sonye n'ịmepụta ozi obi ike na ihe okike maka mpaghara kacha emetụta ụwa niile site na oke ọgbaghara ahụ. Mba iri atọ ahụ si mba ọzọ na -aga TTG, nke ụfọdụ Italytali mepere ụzọ ahụike, nyere akara nke ntụkwasị obi na ahịa njem nlegharị anya na -eche. Ebe okpomọkụ, Middle East, America na Mediterenian Mediterenian, yana Europe, na -eku ume ndụ ọhụrụ ka o kwekọọ na nchịkọta njem nlegharị anya mba ụwa ọhụrụ.
Ya na ndị otu azụmaahịa kacha anọchite anya ya, site na Federalberghi ruo ngalaba nke Confturismo nọchiri anya ya, ASTOI (Onye na -ahụ maka njem nlegharị anya), FTO (Nhazi ndị njem ahaziri ahazi), gụnyere FAITA Federcamping, SIB (Seaside Establishment Union), onye mmekọ ụlọ ọrụ ENIT (Italian Tourism Board). , Mpaghara, ụwa nyocha ya na ISNART, Milan Polytechnic na CNR (National Research Council) na ndị na -enyocha ahịa na ndị na -azụ ahịa, ewepụtala kalenda nzukọ iji nọchite anya njem nlegharị anya n'ọdịnihu.
Ụdị njem nlegharị anya nke ga-akparịta ụka na ụlọ ọrụ iji kwadebe onwe ya ngwa ngwa ngwa achọrọ maka mmalite ọhụrụ: site na amụma etinyere iji kwalite ngalaba ile ọbịa n'ihe gbasara akụrụngwa na echiche iji gboo mkpa na-arịwanye elu maka ịdị mma, na atụmatụ ụlọ ọrụ ọhụrụ, dị ka ọ dị na ITA (Ụgbọ njem ụgbọ elu Italiantali), nke gosipụtara nkwenye ya maka nkwado gburugburu ebe obibi na akụ na ụba site na iji ụgbọ elu ọgbọ ọhụrụ na -arụ ọrụ na izute ọchịchọ maka ụgbọ elu na -aga n'okporo ụzọ etiti.
TTG gosikwara na mpaghara nwere ike nwekwuo ọpụrụiche site na ige ntị n'ọrụ ha na ịkwalite akụ ọdịnala ha na -adịghị ahụ anya na ngwaahịa pụrụ iche, site na njem nlegharị anya ruo ụzọ mmanya. Ọ dị mkpa ka amata usoro azụmaahịa tupu oge eruo ka ọ nwee ike ịtụte ikike asọmpi ndị Ịtali na ahịa ụwa. Isi ihe dị na 58th TTG kwuru asụsụ ntụkwasị obi na ndị mmadụ, ndụ, ọdịdị na ọdịnihu. N'oge mmemme mmeghe, Minista njem nlegharị anya Massimo Garavaglia kwupụtara olile anya na uru nke njem ga -eto site na 20% nke GDP ekele maka njikọta nke akara Italy na usoro nke gọọmentị nabatara maka azụmaahịa na ọrụ.
Iji mee ncheta afọ 70 nke SIA Hospitality Design, ihe ngosi anọ - Ụlọ, N'èzí, Ahụike na Ụlọ nkwari akụ na Motion - nke ndị na -atụpụta ụkpụrụ ụlọ na -ahụ maka ile ọbịa na nhazi nkwekọrịta, gosipụtara ihe ọhụrụ na mgbanwe n'ime ụlọ nkwari akụ Made in Italy n'etiti obere okomoko, nkwado na nnukwu nlebara anya. maka ọdịmma anụ ahụ na nke uche nke ndị ọbịa, na -eleba anya na nguzozi n'etiti oghere mechiri emechi na nke mepere emepe.
SUN Beach & Style Style, na mbipụta nke iri atọ na iteghete, gosikwara mmemme nwere echiche ọhụrụ maka ụlọ ọrụ dị n'èzí, ụlọ ịsa ahụ na ogige. Echiche ọhụrụ na-enwu enwu jikọtara ọnụ maka ịchọ imewe, nlebara anya na nkọwapụta na mmụọ ikuku maka ahịa nwere nnukwu ike maka ma Italy ma mba ofesi, gụnyere mba oyi nke ugwu Europe. SUN nyekwara ngwaọrụ maka ụlọ ọrụ ka ọ bụrụ ọkachamara na ngalaba a, yana arụmụka ezubere iche na mmemme Outdoor Arena yana gbado anya na isiokwu dị iche iche na Beach Arena na teknụzụ dijitalụ ọhụrụ nke osimiri chọrọ ugbu a inye ndị ahịa ọrụ ọhụrụ n'aha. nke ezumike na nchekwa.
Ọzọkwa, n'afọ a, ụlọ nzukọ SIA gosikwara ihe omume Superfaces ọhụrụ, ahịa b2b kpọmkwem maka ihe ọhụrụ maka ime, imewe na ihe owuwu ụlọ.
IEG na-atụ anya izute ụlọ ọrụ njem nlegharị anya Italiantali na mba ọzọ ọzọ na Rimini Expo Center site na Ọktọba 12-14, 2022.